Ahoana no ahitanao ny Tracker GPS ao amin'ny Fiaranao amin'ny dingana 5 | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Izahay dia nahita amin'ny sarimihetsika toa an'i James bond, tsy azo atao ny misiôna ary trano sherlock, misy olona manandrana miboridana ilay fiara amin'ny alàlan'ny fametrahana GPS tracker anaty fiara mba hananana fampahalalana faharoa sy faharoa momba ilay olona lasibatra. Ireo mpamily fiara mandeha miafina dia fitaovana kely miantehitra amin'ny toerana iainana SYSTEM (GPS) sy tambajotra finday mba hitazomana ny tabilao eo amin'ny toerana misy ny fiara na kamiao amin'ny fotoana tena izy. Na dia tsy natao ho takona azy aza ireo trackers fiara GPS rehetra, ny ankamaroany dia kely sisa dia afaka mandeha mora foana tsy voamarika amin'ny maso tsy voatana sy tsy matoky. Ny ankamaroan'ireny fitaovana ireny dia mety hampiasaina mba tsy hahitana ny fihetsehan'ny hoe aiza ary rahoviana ny olona iray mivoaka avy ao an-tranony na ny toerana mety hitetezany. Izao dia mety hieritreritra ny tenanao ianao, ahoana no hahafantaranao fa nisy olona nandrombaka ny fiaranao? Ireto misy dingana dimy azonao atao mba hahitana ny tracker GPS ao anaty fiara misy anao.
Dingana 1: Mikaroka ivelany ivelan'ny fiara
Ny fomba tsara indrindra hahitana ny tracker GPS ao anaty fiaranao dia ny manomboka amin'ny fijerena ny ivelany ivelany amin'ny fiara toy ny undercarriage, kodiarana, ao anaty baravarana ary mandinika ny tafo. Ny antony mijery ny ivelany ivelany aloha dia satria misy olona nametraka azy tany ivelan'ny fiara ka rehefa nametraka ny fiara ianao hatraiza hatraiza. Ary ny ankamaroan'ireo mpanara-maso GPS ireto dia misy magnetika ka azo apetraka mora vidina, ao anaty beny na eny ambony tafo.
Dingana 2: Mikaroka ao anaty ny fiara
Misy ny mety hitranga izay olona akaiky anao dia mety te-hitsikilo anao ary hanara-maso ny asa andavanandro iainany any amin'izay ahafahany mametraka ny tracker GPS ao anaty fiara ihany koa. Noho izany, ny dingana faharoa dia mijery tsara ao anaty fiara amina toerana toa ny ao anaty ho-ambany, dashboard, lamosin'ny fiara, eo ambanin'ny seza sy ny kitapo. Azonao atao ihany koa ny manamarina ny seranan-tsambo sy ny toerana tahaka ny seranan-tsambo USB sy ny entana. Raha misy USB injection efa misy anao na dia ny anao ihany aza, esory. Raha manana rafi-peo mifono am-bava ao anaty fiarao ianao na automatique dia apetaho fotsiny amin'ny alàlan'ny safidy ary andramo ny hamantatra raha misy fitaovana hafahafa miraikitra aminy ao anatiny. Fantaro fa raha ny sezera mpanamory dia apetraka amin'ny atiny fa tsy ho sarotra ny mijery azy dia ho azo antoka fa mandinika tsara ianao ary diniho tsara ny tariby rehetra mivoaka ny tabilao na hailin'ny fiarenanao izay tsy naseho teo aloha.
Dingana 3: Makà fanampiana olona
Raha tsy vitanao ny manara-maso GPS Tracker ao anatiny sy ivelan'ny fiara ka fotoana tokony hahazo fanampiana avy amin'ny olona iray. Isika rehetra dia manana namana iray izay mihevitra ny tenany ho mpikaroka dia maka fanampiana avy amin'izy ireo hanohy ny tracker GPS. Azonao atao ihany koa ny mandray fanampiana avy amin'ny masinina misy anao eo an-toerana satria iza no mahalala tsara kokoa ny fiara noho ny mekanika. Farany, afaka manakarama matihanina amin'ity asa ity ianao izay azo antoka fa hanampy.
Dingana 4: Fampiasana (SPY993) GPS / SPY Camera RF Dual Sign Detector:
Ity iray ity dia natokana mafy hividianana raha hita fa misy olona nametraka fitaovana fanaraha-maso ao anaty fiaranao na mety nanararaotra karazana fakantsary mba handraisana an-tsoratra ny zavatra rehetra lazainao rehefa mitondra fiara manodidina anao. SPY933 dia GPS compact ary koa ny fakan-tsary SPY izay miasa tsara amin'ny maha-pro, azo ampiasaina hahitana ny santimetatra rehetra amin'ny atiny sy ny ivelany anatiny, ary ao anatin'ny scan iray ihany! Ity mpitsikilo ity dia miaraka amin'ny bateria 1500 MAH izay mihazona azy mihazakazaka ary manome toky ny fiarovana ambaratonga iray ho anao sy ny fiaranao raha tsy hoe mijaly mafy ny fanamafisana mandritra ny fotoana rehetra. Afaka mamantatra ny fangalarana mampiahiahy ao anatin'ny sakelin'i 1MHZ -o amin'ny 8000MHZ ka mahatonga azy ho iray amin'ireo vokatra azo itokisana indrindra any, izay ahafahan'ny olona mampahafantatra ny sainy momba ny fisalasalana ho an'ny mpanamory iray ao anaty fiarany. Tsy izany ihany fa an-tariby ihany koa ity mpikaroka ity izay manome tombony amin'ny tsy mahazo eo an-tananao na mikorontana manelingelina anao mandritra ny fandinihanao ny dianao. Noho ny habeny madiodio dia azonao atao ny mitazona azy manodidina na aiza na aiza misy ao anaty fiara mba hampiasa azy io isaky ny mila izany ianao. Raha tsorina dia fonosana fiarovana feno eny an-tànanao izany!
Dingana 5: Antsoy ny sela sy fepetra amin'ny ho avy:
Azo inoana fa raha manaraka ny dingana etsy ambony ianao dia hahita GPS tracker raha nisy olona nametraka ny fiarao. Voalohany, aza mikasika ny GPS tracker mety mitondra ny dian-tànan'ny olona voarohirohy. Faharoa, antsoy ny polisy eo an-toerana ary mitantara izay niseho taminao fotsiny. Farany, amin'ny ho avy aza dia aza atao mametraka ny fiaranao any amin'ny faritra malalaka, andramo hizaha toetra ny fiaranao isan'andro isan'andro na afaka mividy GPS tracker izay hanampy anao mandritra ny fotoana maharitra.
Fitaizana zaza manana autisme - Misafidiana GPS tsara indrindra…